Izinto Zokuzivocavoca Zokuzivocavoca, Ukuqina Treadmill, Izinsiza Zokuzivocavoca Ingalo - Baisheng
"Okugxilwe kubantu" yisisekelo sesiko lethu lebhizinisi. "Inzuzo Mutual, emisha emisha, inhlonipho ngesintu kanye nokusebenza okuqhubekayo" umgomo wethu webhizinisi. Sizothuthukisa umoya omusha kanye nokwenza izinto zangempela, sikhiqize imikhiqizo emihle kakhulu ngezinto ezisezingeni lokuqala.
I-Plate Load Hip Abduction BS-D48
0 I-Degree Triceps Press Machine
I-Indoor Cycling BS-6521
I-Chest Press BS-4001
I-XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD ekhethekile ekucwaningeni nasekukhiqizeni imishini yokuzivocavoca. I-BS SPORTS inokutshala imali okuphelele ama-USD 3 Million, okuhlanganisa indawo yomhlaba engamamitha-skwele angaphezu kuka-10000.
Ububanzi bebhizinisi le-BS SPORTS buhlanganisa insizakalo ye-R&D, Production, Sales kanye ne-After-sale yemishini yokuzivocavoca yokuzivocavoca, indawo yokuzivocavoca yasekhaya kanye nemikhiqizo ehlobene nayo.Over 70% imikhiqizo iyathengiswa eNyakatho Melika, eMpumalanga Yurophu, Middle East, eTaiwan, ongKong njll.
Ukusethwa kokuzivocavoca kwasekhaya okuphelele kusho ukuthi akusafanele ukhokhe ubulungu bokuzivocavoca noma umqeqeshi womuntu siqu. Konke okudingayo yimishini yokusebenza efanelekile. Futhi amathuluzi wakho wokukhetha azohluka ngokuya ngezinga lakho lokuqina nezinjongo zokuqina. Uzama ukunciphisa umzimba? Ungase uthande ukushisa amakhalori nge-c ...
I-XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., I-LTD izohambela i-China Sport Show eShanghai ngoMeyi, 2020 futhi izohambela nombukiso wakwamanye amazwe afana neVietnam, India njll .Bheke phambili ukuhlangana nawe lapho!